Home Wararka Kaalinta Jaadka reer Farmaajo ee Itoobiya & khilaafka Rooble
Kaalinta Jaadka reer Farmaajo ee Itoobiya & khilaafka Rooble
Heshiiska uu qoyska Farmaajo Jaad kaga soo dhoofinayo Itoobiya iyo kalsooni-darro ayaa laga yaabaa inay wax weyn ku biirisay isku-dayga Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayay in uu ku baajiyo socdaalka Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ee Nairobi.
Rooble, oo xilka la wareegay Oktoobar 2020, ayaa lagu wadaa inuu booqdo Nairobi Talaadada toddobaadyo uun ka dib markii Soomaaliya ay dib u soo celisay xiriirkii ay la lahayd Kenya kadib bilooyin is qabqabsi ah.
Mar sii horeysay, wafdiga horudhaca Rooble ayaa ku sugan Nairobi si ay ugu diyaar garoobaan soo dhaweynta, laakiin ilo wareedyo ayaa xaqiijiyay in Farmaajo uu diidan yahay booqashaddaas.
Axadda shalay ahayd ayeey Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya, Raychelle Omamo, soo gaartey Muqdisho. Balse safarkeedu wuxuu imanayaa saacado uun ka dib markii Farmaajo uu soo saaray wareegto uu si ku-meel-gaar ah u hakinayo saxiixa nooc kasta oo heshiis ah ama is-afgaradyo ilaa doorashada laga soo gabagabeynayo.
Omamo waxaa lagu wadaa inay xoogga saarto sidii loo riixi lahaa in xayiraadda laga qaado Jaadka Kenya, arrintaas oo Rooble lagu waday inuu ka hadlo marka uu Nairobi yimaado.
Kenya ayaa ahayd dalka ugu badan ee jaadka u dhoofin jiray Soomaaliya balse isbedel weyn ayaa yimid afartii sano ee u dambeysay, taasoo ku qasabtay Nairobi inay sidoo kale joojiso duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho.
Tafaasiil uu helay Garowe Online ayaa muujineysa in xayiraadda Jaadka Kenya lagu soo rogay si loogu gogol xaaro ganacsiga qoyska Farmaajo kadib markii ay heshiis la saxiixdeen Itoobiya. Itoobiya waxaa la siiyay xuquuq gaar ah oo ay Jaadka ugu dhoofiso Soomaaliya.
Macaashka qoyska Farmaajo ee Jaadka Itoobiya
Farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa hadda gacanta ku haya ganacsiga Jaadka oo malaayiin doollar ah ay ka sameeyaan ka dib markii Villa Soomaaliya xayiraad saartey Jaadka Kenya bishii Maarso 2020 iyagoo huwan xannibaadaha COVID-19.
Muddo bilooyin oo aan kasoo gudubnay, Itoobiya waxay Jaadka u dhoofisaa magaalooyinka Soomaaliya, iyadoo qoyska Farmaajo lagu waramay inay yihiin kuwa ugu badan ee ka macaashaya.
Kenya ayaa dhankeeda waxay la halgameysaa sidii looga qaadi lahaa xayiraaddaas, iyadoo mararka qaar lagu qasbay inay hakiso duulimaadyadii tooska ahaa ee Soomaaliya si ay uga aargoosato.
In kasta oo uu Farmaajo ka hor-yimid booqashada qorshaysan ee Rooble ee Nairobi, ilo wareedyo badan ayaa xaqiijiyay in wasiirka koowaad uu isku diyaarinayo socdaalka isla markaana uu maanta guddoomay martiqaadka.
Rooble, oo dhowaan lagu wareejiyey maamulka doorashooyinka, ayaa u muuqday hoggaamiye qunyar socod ah oo aamminsan wada -hadalka, taasoo laga yaabo inay ka careysiisay maamulka Farmaajo.
Go’aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku soo rogtay xayiraadda Qaadka Kenya ma ahayn oo kaliya mid ganacsi ku qotomay ee sidoo kale waxaa lagu farsameeyay siyaasad sababo la xiriira danaha kala duwan ee qoyska Farmaajo.
Iyaddoo mamnuucida Jaadka ay sababtey cawaaqib-xumo dhaqan-dhaqaale iyo caafimaad oo saameysay dhinacyo kale oo badan nolosha dadka ah, dawladdu waxay suuq u siisay dejinta Jaadka Itoobiya sababo la xiriira danaha qoys madaxweynaha waqtiga ka dhamaadey oo doonaya in mar kale uu 4-ta sano ee soo aadan uu sii taliyo.
Previous articleROOBLE oo jawaab culus kasoo saaray amarkii Farmaajo “Awoodaha fulinta waxaa leh xukuumadda”
Next articleAl Shabab oo looga cabsi qabo in ay kala jaraan wadooyinka isku xira Galmudug
Feeysal Cali Waraabe oo weerar afka ah ku qaaday DFS